राजनीति – Simple Khabar
On April 3, 2019 By simplekhabar
अभिनेत्री रेखा थापाको परिचय त अब दिइराख्नु परेन । यो खबर साप्ताहिक इकान्तिपुरमा खबर छ । झण्डैं २० बर्षअघि नेपाली चलचित्र उद्योगमा छिरेकी यि अभिनेत्री पछिल्लो समय राजनितीमा पनि सक्रिय छिन् । केहि बर्षअघि राप्रपाको केन्द्रिय […]
राजनीति समाचारLeaveacomment
इन्जिनियर दिपेन्द्र कंडेल पुर्व माओवादी रहेको खुलेको छ।मिडियामा अन्तरबार्ता दिदै गर्दा उनले आफ्नो पृष्ठभूमि वताएका हुन्।प्रचण्ड निकट आफु रहेको उनले खुलाएका छन।केहि दिन अगाडी उनले प्रचण्ड को बिषयमा बोल्दा बिबाद खेप्न परेको थियो। प्रचण्डलाइ अमेरिकामा […]
Banner News राजनीति समाचार समाजLeaveacomment
चेकिङमा कडाइ ! सिंहदरबारमा विप्लवको डर
काठमाडौ १०, चैत । आइतबार सिंहदरबार प्रवेश गर्दा कडाइ गरिएको छ । सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै सिंहदरबार प्रदेशमा प्रहरीले कडाइ गरेको हो । अहिले सुरक्षा जाँचका कारण लामै लाइन छ । अन्य दिन परिचयपत्र वा पास […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताएका छन् । आइतबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै सम्झाउँदा पनि विप्लव समूहले लुट, हिंसात्मक गतिविधि नरोकेकाले कानुनअनुसार नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताए । उनले […]
रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि, योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री ……
नेकपा नेता योगेश भट्टराई छिट्टै मन्त्री हुने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने भएका हुन् । स्रोतका अनुसार ओलीले भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । रवीन्द्र अधिकारीको […]
चैत्र ७ काठमाडौँ ।फागुण २४ गते काठमाण्डौं शान्तिबाटीकामा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा र्याली र कार्यक्रम गर्ने क्रममा हस्तक्षेप गरी प्रहरीले पक्राउ गरेका नेकपाका ६ जना नेता कार्यकर्ताहरु आज रिहा भएका छन् । सर्वोच्चमा बन्दी […]
बाबुराम भट्टराई : आफ्नै नेताले २० अर्ब खाएको भएरै मैले माओवादी पार्टी त्याग गरे आखिर को (भिडियो सहित)
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले माओवादी पार्टी छाड्नुको कारण त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको खुलासा गरेका छन् । भ्रष्टाचार पनि अरू कसैले नभएर स्वयं प्रचण्डले गरेको भट्टराईको दाबी छ । तत्कालीन […]
आफुलाई मार्ने षड्यन्त्र भएको प्रचण्डको खुलासा
On March 14, 2019 March 14, 2019 By simplekhabar
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विप्लव समूहले आफूलाई मार्ने षडयन्त्र गरेको बताएका छन्। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वाइसिएलले आयोजना गरेको सहिद तथा वेपत्ता परिवार सम्मान कार्यक्रममा प्रचण्डले हिजो सँगै काम गरेका […]